October 30, 2012 – democracy for burma
RCSS Statement STANDPOINT SNLD 29oct 2012 -Shan -Bur-english
Burma:Tripartite Agreement reached in Tachilek (Unofficial translation)
Plans for the crop substitution pilot project will be jointly drawn up, explained to the people, obtained their suggestions and then implemented
The crop substitution pilot project at the chosen sites will be implemented by government-UNODC-RCSS as soon as possible*
UNODC will render technical assistance to the government-RCSS crop substitution project sites
UNODC will discuss with international donors for the provision of immediately needed funds for the project
RCSS will keep the local people as well as its members informed on protection against dangers of drugs, reduction and total eradication of opium cultivation, cooperation in the control of drugs and implementation of the crop substitution project
For effective implementation CCDAC, Shan State Police Force and RCSS will each appoint contact persons and exchange information through emails, telephones and other appropriate means
Security issues in the joint CCDAC-UNODC and RCSS crop substitution project sites will be presented to the higher authorities**
UNODC = UN Office on Drugs and Crimes
CCDAC = Central Committee for Drug Abuse Control
RCSS = Restoration Council of Shan State
*The UNODC wants the project to be implemented by the end of 2012
*The RCSS has requested that its members are allowed to carry arms in the project areas
The meeting Continue reading “Burma:Tripartite Agreement reached in Tachilek (Unofficial translation)” →
မန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ Myanmar National Movement Committee(M.N.M.C)Arakan Ashin Kundala
On October 30, 2012 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၃၀ရက်
၁။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သော အစိုးရသည် မိဘနှင့်အလားတူပါသည်။ အုပ်ချုပ်ခံ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများသည်သားသမီးများနှင့်
အလားတူပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများပါဝင်ပေသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဘင်္ဂါလီအစွန်းရောက်မွတ်စလင်ကုလားတို့၏ အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီး
သတ်ဖြတ်ခြင်းများနှင့် ပါတ်သက်၍ မိဘဖြစ်သည့် အစိုးရမင်းသည် သားသမီးများဖြစ်သည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အသက်အိုးအိမ်
၂။ ကရင်ပြည်နယ် သံဃာ့ဂိုဏ်းပေါင်းစုံအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ထားသော အောက်ပါ အချက်များကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ
သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအသီသီးမှ ထပ်ဆင့်ထုတ်ပြန်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
(က) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသားများပိုင်ဆိုင်သော အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အစရှိသည်တို့ကို မွတ်စလင်များအားရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရန်။
(ခ) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးများသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမပြုလုပ်ရန်။
(ဂ) မွတ်စလင်တို့ရောင်းချသော ဈေးဆိုင်များတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးက ရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်။
(ဃ) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှမွတ်စလင်များအား တဆင့်နာမည်ခံပေးပြီး အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အစရှိ
သည်တို့ကို ဝယ်ယူအားပေးခြင်း မပြုလုပ်ရန်။
၃။ အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာဟူသော
အသုံးအနှုန်းနှင့်နိုင်ငံထူထောင်ရန် အကြံဆိုး၊ စရိုက်ဆိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသော ပြည်တွင်းပြည်ပမှ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေသူများကို
၄။ ရခိုင်ပြည်နယ် နေရာအနှံ့မှ ရွေ့ ပြောင်း တရားမ၀င်ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များ
ကိုမောင်တောမြို့ နယ်တွင်နေရာချထားခြင်းဖြင့် မောင်တော
၏လုံခြုံရေးကို ပိုမိုဆိုးရွာလာစေနိုင်သောကြောင့် ယင်းအစီအစဉ်အား
၅။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက် တရားမဝင်ကျူးကျော် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကို
အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး အစီအစဉ်များ လုံးဝမပြုလုပ်ပါရန်နှင့် အကြမ်းဖက်မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များအား တရားဥပဒေနှင့်အညီ
Iranian come to Burma see the “Oppressed Muslim” BUT EUROPEAN DELEGATION VISIT2JAILED ACTIVISTS FREEDOM PRIZE AWARDED DENIED!!!
The European Parliament awarded the 2012 Sakharov Prize for Freedom of Thought to Soutedeh,ahuman rights lawyer, and Panahi,afilmmaker who won the Camera d’Or at the 1995 Cannes Film Festival. Both were charged with roles in supporting the opposition in post-election unrest in 2009.
Tarja Cronberg,aFinn who chairs the European Parliament delegation for relations with Iran, was told by the Iranian ambassador to the European Union on Saturday that it was impossible to guaranteeavisit to Tehran’s Evin prison “at such short notice.” Cronberg then decided to cancel the trip, which has been scheduled to run to Nov.2and include meetings with Iranian lawmakers and representatives from civil society groups.
“I deeply regret that permission to meet the Sakharov laureates was withheld,” Schulz said. “The European Parliament is nevertheless determined to continue its support for and involvement with the Iranian civil society.”
The Iranian lawmaker Boroujerdi was quoted as saying that the visit was cancelled after Iran rejected preconditions. He heads the parliament’s Committee on National Security.
Mehr quoted Hossein Sheikholeslam, an adviser to Iran’s parliamentary speaker, that the German group has already arrived in the country and are on the visit to central Iranian city of Isfahan.
The group will meet several Iranian top lawmakers as well as the director of the human rights committee of the Iranian Foreign Ministry. They also are scheduled to visit Qom, the centre of Shiite religious study about 130 kilometres (80 miles) south of Tehran.
The trip by the group has been scheduled within the Iran-Germany parliamentary friendship group, headed by Iranian-born Bijan Jirsarai,amember of Germany’s parliament. Before tighter EU sanctions, Germany wasamajor trading partner with Iran.
Read more: http://www.vancouversun.com/news/world/European+delegation+calls+Iran+visit+after+blocked+from+prison/7460032/story.html#ixzz2AnQaWpYy
“We have no right to speak, we are marginalised in the international arena,”opressed Rakhine Buddhists
SITTWE, Myanmar — Disgruntled by international support for Muslim Rohingya in unrest-hit western Myanmar, ethnic Rakhine Buddhists are demanding recognition of their own plight and ventingarage that veers into racism.
But many Rakhine, whose state is one of Myanmar’s poorest, are adamant it is in fact they who have been wronged, first by grinding years under the iron-fisted junta rule and more recently by rising numbers of Rohingya on their land.
“We have no right to speak, we are marginalised in the international arena,” said Oo Hla Saw, general secretary of the Rakhine Nationalities Development Party.
“We can live with many kinds of people, but not with the Muslims from here,” said U Ohattama,asenior monk at Klak Kha Mout monastery. “The Muslims from here are like animals.”
ARAKAN LEAGUE FOR DEMOCRACY STATEMENT 29.10.2012
Rakhine Straight View: ၃၀-၁၀-၁၂ ကြိမ်ချောင်း
မောင်တောမြို့နယ် ၊ကြိမ်ချောင်း ကျေးရွာအနီးတွင် ဘင်္ဂလီများအားနေရာ ချ ထားပေးမှု အတည်ဖြစ်မည်ဆိုပါက မောင်တောမြောက်ပိုင်းမှ ရခိုင်တိုင်းရင်း သားကျေးရွာများသည် နေရာပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ခြေရှိကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်ဖြူနှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်များမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသော ဘင်္ဂလီများအား မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် နေရာချထားပေးမည်ဟု သိရှိရသဖြင့် ယင်းဒေသတွင်း
နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားများသည် မြို့ ပေါ်သို့ နေရာ ပြောင်းရွှေ့လာနိုင်ခြေရှိကြောင်း ဒေသခံများက သုံးသပ်ပြော ဆိုကြပါသည်။
ကြိမ်ချောင်းအနောက်ဘက် ကျွန်းတွင် နေရာချထားမည့်သတင်းသည် လက် ရှိအနေအထားတွင် အတည်မပြုနိုင်သေးသော်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး ရှိ ကြောင်း အစိုးရဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြောပါသည်။
ယင်းအတွက် ပြုန်းမ၊ ခံပြင်၊ တရိန်း အစရှိသော ရခိုင်ကျေးရွာများမှ ဒေသခံများ အခြားနေရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ခြေရှိကြောင်း မောင်တော မြို့မှ RSV သတင်းထောက်မှ ပေးပို့ချက်အရ သိရှိရပါသည်။
ဘင်္ဂလီသုံးထောင်ကျော်တို့အား နေရာချထားပေးရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း နှင့် ယခင်ကတည်းက ဘင်္ဂလီများစွာရှိနေပြီး မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂလီ ၉၆ ရာခိုင်နုန်းရှိနေခြင်းအား ထပ်မံတိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ပိုမိုများပြား သွား နိုင်ကြောင်းလည်း သုံးသပ်ကြပါသည်။
ထိုသို့များပြားလာပြီလာဆိုသည်နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအတွက် လွန်စွာ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ကြောင်းလည်း ယင်းဒေသမှ ရခိုင်များမှ ပြောပါသည်။
Rakhine Straight View 29.0ctober : အများသိစေရန် တင်ပြခြင်း*************** RSV အား တိုက်ခိုက်မှုများရှိနေပါသည်။
ယင်းအတွက် ဆင့်ပွားထားခြင်းများ၊လင့်လုပ်ထားခြင်းများလုံးမရှိပါ ကြောင်းနှင့် တကယ်၍ ရှိခဲ့ပါက RSV အားမနာလိုသော လူတစ်စု၏ လက်ချက်သာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။RSV သည် သတင်းများကို ရိုးသားစွာနှင့်မှန်ကန်စွာ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး RSV ကို အားအပေးသော ပရိတ်အားလုံးကလည်း သိရှိထားပြီဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတွင် RSV ပုံစံတူ လင့်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိလာရပါသည်။ ယင်းအတွက် ပရိတ်သတ်များအနေဖြင့် အထူးသတိထားပြီး ဖတ်ရှုအားပေးကြပါရန် အေး စွာ ဖြင့် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။